Na-egosi izipu site na Mee, 2020
Snezka 3D map
Sněžka (Polish Śnieżka, German Schneekoppe) nọ na oke osimiri dị 1603,3 (nke ekwuru na mbụ 1602 m karịa oke osimiri) ugwu kachasị elu n'ugwu Giant, Sudetenland, Silesia, Bohemia, na Czech Republic dum. N'ihi eziokwu na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Sněžka dị na Poland (ihe dị ka 10 cm karịa), ọnụ ọgụgụ kasị elu nke dị na Czech Republic bụ Luční hora.
Ọ bụ ihe dị mkpa nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Oké Osimiri Ukwu. Mpaghara Czech-Polish na-agafe elu ugwu Sněžka, ebe kachasị elu dị n'akụkụ Polish, ókè ole na ole n'ebe ọdịda anyanwụ nke Ụlọ Akwụkwọ nke Sts. Lawrence. Site na 4,5 kilomita dịpụrụ adịpụ nke ụgbọ ala ụgbọ elu Sněžkou na-ewega gị n'elu. Ebe ugwu, Polish ga-adaba na ndagwurugwu osimiri Lomnička, nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ ruo Úpské peat, n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ n'akụkụ Obří důl, nke dị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ na ndagwurugwu Jelení na n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke nnukwu Ridge.
Elu ugwu ahụ bụ nkume ma nwee ebe dị ihe dị ka 120 m000. Dịka Sněžka bụ ugwu kachasị elu na mpaghara sara mbara, enwere elu mbara ihu site n’elu. Ọnụ ọgụgụ dị elu na-eje ozi dị ka njem nlegharị anya ugboro ugboro iji mezuo ya ọ ga-ekwe omume iji ọtụtụ ụzọ njem nlegharị…
Otu n'ime ọtụtụ echiche dị na Circuit Nnukwu na Prachovské skaly bụ Hakenova vyhlídka. Akpọrọ ya aha nsọpụrụ nke Prọfesọ Haken si Horní Lochov dị nso, onye mere nchọpụta ihe omimi na nkume. Hakenova vyhlídka dị n'etiti Prachovské skal site na sekit buru ibu (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). N'ihi osisi ndị tozuru etozu gbara gburugburu, a na-ahụ naanị ihe anya na-elele, mana a ka nwere Krkavčí skály na Tábor. Oge kacha nma ileta atụmanya a bụ oge opupu ihe ubi.
Odoro anya nnabata nke Udo
Vyhlídka Míru dị n'etiti akụkụ ugwu nke Prachov site na oke nkume dị na Císařská chodba ma nye anyị ikekwe nlele kachasị mma na mpaghara nnukwu ugwu Prachovské skal na mbara ihu ọdịda anyanwụ. Site n ’ụzọ lee ya anya, enwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ elu na-abụkarị echiche nke ndị na-arị ugwu na-emeri otu n’ime ha. N'adịghị anya na ndagwurugwu ọ ga-ekwe omume ịhụ Pechova na Šlikov. N'elu elu anyị nwere ike ịhụ silhouette nke akara nke Bohemian Paradise castle Trosky ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke Vysker. Nnukwu nlegharị anya na obere nlegharị anya ga-eduga anyị na ya.
Site na Echiche Maka Udo, enwere ọmarịcha echiche banyere nkume gbara ya gburugburu, Prachovská agịga, Madonna na Plechálech. Ndi ozo a huru bu Trosky, Vyskeř na Mužský.
Obodo nkume nke Hruboskalské bụkwa mpaghara njem dị mkpa. Nrịba ama a ma ama gụnyere chateau Hrubá skála, nke e wukwasịrị n’elu oke ugwu na narị afọ nke 14…
Mpaghara obodo dị nso 90km n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Prague bụ obodo: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice na Jičín. A na-atụle Turnov na "obi nke Paradaịs Bohemian". Isi obodo akara nke mpaghara ahụ bụ ugwu Kozákov na mkpọmkpọ ebe nke Trosky. Obodo oke mmiri dị mkpa, ọkachasị Prachovské skály, Příhrazské skály, Hruboskalsko na ọdọ mmiri, dịka Žabakor, Komárovský rybník na ọdọ mmiri na ndagwurugwu Podtrosecké na Podkostecké…